संगीत पक्ष निकै उत्कृष्ट रहेको सुदर्शन थापा निर्देशित म यस्तो गीत गाउछु चलचित्र हेरीसकेपछी क-कस्ले के के प्रतिकृया दिए? ( फोटो भिडियो ) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentसंगीत पक्ष निकै उत्कृष्ट रहेको सुदर्शन थापा निर्देशित म यस्तो गीत गाउछु चलचित्र हेरीसकेपछी क-कस्ले के के प्रतिकृया दिए? ( फोटो भिडियो )
July 13, 2017 sutraentertainment Entertainment, Kollywood, News 0
कुमारी हलमा गरिएको प्रिमियरमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रका अधिकाङ्श कलाकार र पत्रकारहरुको उपस्थिती रहेको थीयो। पल शाह र पूजा शर्माको मुख्य अभिनय रहेको चलचित्रमा सरोज खनाल, रुपा राणा, राजाराम पौडेल लगयतको अभिनय देख्न सकिन्छ।चलचित्रको गीत संगितले सवैको मन जितेको छ । कार्यक्रममा उपस्थित कलाकार एंव दर्शकले चलचित्र मन परेको वताएका थिए । कलाकारले चलचित्र सुटिङको दौरानमा भएका अविस्मरणिय घटना वताउदै गर्दा माहोल थप रोचक वनेको थियो । प्रतिकृया दिने क्रममा दर्शकले फिल्मको कलाकार र अभीनयको खुलेर प्रशंशा गरेका थिए ।
संगीत पक्ष निकै उत्कृष्ट रहेको सुदर्शन थापा निर्देशित म यस्तो गीत गाउछु चलचित्र हेरीसकेपछी क-कस्ले के के प्रतिकृया दिए?